Dowlada Turkiga digniin adag oo la xariirta Qoxootiga u dirtay Midowga Yurup – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Turkiga digniin adag oo la xariirta Qoxootiga u dirtay Midowga Yurup
Dowlada Turkiga ayaa ayaa sheegtay in ay sii deyn doonto Qaxootiga dalkeeda ku sugan islamarkaana u fasixi doonto in ay galaan Yurub hadii EU-da aysan kasoo bixin heshiiskii ay wada galeen.
Wasiirka Turkiga u qaabilsan arrimaha EU-da Mr.Cumar Celik ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay in heshiiskii bilowgii sanadkan ay wada saxiixdeen dowlada Turkiga iyo EU-da la fulin waayo ay markaas fasixi doonaan in Qaxootiga ay hayaan ay u gudbaan dalalka Yurub.
Heshiskaasi ayaa waxa uu qorayey in Midowga Yurub ay muwaadiniinta Turkida u fasaxaan in ay fiiso la’aan ku galaan dalalka Yurub.
Sidoo kale heshiiskii bishii Maarso ee sanadkan wada galeen EU-da iyo Turkiga ayaa waxaa uu dhigayay dowlada Turkiga ay xakameyso qaxootiga tirada badan ee dalkeeda soomaraya gaar ahaan qaxootiga ka imaanayey Siiriya, waxayna Midowga Yurub u balan qaadeen dowlada Turkiga deeq dhaqaale oo lagu dhiso xeryo qaxooti gudaha Turkiga iyo waliba in dadka heysta Baasaboorka Turkiga ay fiiso la’aan ku tagi karaan dalalka EU-da.
Heshiiskaasi waxaa sidoo kale qeyb ka ahayd in la bilaabo mashruuca Turkiga uu mustaqbalka ugu biirayo Midowga Yurub.
Waxaase bilihii lasoo dhaafay caqabado ku keenay fulinta heshiiskan kadib markii EU-da ay cambaareysay sharciga cusub ee Dowlada Turkiga ansixisay ee la dagaalanka Argagaxisada, waxaana sii xigay xiisadii ka dhalatay inqilaabkii Fashilay, kadib markii Midowga Yurub uu cambaareeyey ololaha xukuumada Erdogan ay ku xir xirtay kumanaan dad ah oo ay ku jiraan suxufiyiin iyo shacab lagu tuhmay afgembiga dhicisoobay.
Dalalka Eu-da ayaa hada shaki gelinaya in ay fulin doonaan heshiiskii ay horey ulla saxiixdeen Turkiga taasi oo keentay hanjabaada hada kasoo yeertay dhinaca Ankara.
← Warbixin laga soo saaray maanta wadooyinka ugu shilalka badan dalka
5 qof oo ku geeriyootay Shil gaari oo ka dhacay Makindu →